अध्याय ६६ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरो काम यो अवस्थासम्म जारी रहेको छ, अनि यी सबैले मेरा हातको बुद्धिमानी बन्दोबस्तहरूलाई पछ्याएको छ, र यो सबै मेरो ठूलो सफलताको रूपमा रहेको छ। मानिसजातिको माझमा कसले त्यस्तो कुरा गर्न सक्थ्यो? बरु मानिसहरूले मेरो व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने कुरा साँचो होइन र? तथापि, तैँले के जान्नुपर्छ भने, मेरो साटोमा कसैले मेरो काम गर्न सक्दैन, यसलाई बाधा दिने त परको कुरा हो, किनकि मैले भन्ने र गर्ने कुराहरू गर्न सक्ने एउटै व्यक्ति पनि छैन। कुरा यो भए तापनि, मानिसहरूले अझै मलाई, म बुद्धिमान सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरलाई चिन्दैनन्! बाहिरी रूपले, तिमीहरूले मलाई खुल्लमखुल्ला विरोध गर्ने साहस नगरे तापनि, तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनमा, तिमीहरूले आफैलाई मेरो विरुद्धमा खडा गर्छौ। मूर्खहरू! म परमेश्‍वर मानिसको अन्तस्करणलाई नियाल्‍ने परमेश्‍वर हुँ भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? के तेरो हरेक वचन र कामलाई म ध्यानपूर्वक हेर्छु भन्‍ने तँलाई थाहा छैन? म तँलाई यो भन्छु: मेरो ओठहरूबाट फेरि अन्यजातिका शब्दहरू उच्चारण गरिनेछैन। त्यसको साटोमा, मेरा सबै वचनहरू कठोर न्यायका वचनहरू हुन्, अनि तिमीहरूले त्यसलाई सहन सक्छौ कि सक्दैनौ भनी म हेर्नेछु। अबदेखि, जसको हृदय मेरो नजिक छैन—अर्थात्, जोसित मप्रति साँचो प्रेम छैन—तिनीहरू मलाई खुल्लमखुल्ला विरोध गर्नेहरू हुन्।
आज, पवित्र आत्माको काम यस्तो बिन्दुमा आएको छ कि जसमा पहिलेको विधि उपरान्त प्रयोग गरिनेछैन; त्यसको साटोमा, एउटा नयाँ विधि कार्यान्वयन गरिँदैछ। जसले मसित सकारात्मक र सक्रिय रूपले सहकार्य गर्दैनन्, तिनीहरू अधोलोकमा, मृत्युको अतल कुण्डमा खस्नेछन् (अनि यी मानिसहरूले सदाको निम्ति विनाश सहनेछन्)। नयाँ विधि यसप्रकार छ: यदि तेरो हृदय र मन ठीक छैन भने, तँमाथि तुरुन्तै मेरो न्याय आइपर्नेछ। यसमा संसार, धन, आफ्नो परिवार, श्रीमान्, श्रीमती, खानेकुरा, कपडा अनि त्यस्तै कुराहरूमा लिप्त हुने कार्य सम्मिलित हुन्छ, जुन आत्मिक क्षेत्रको भाग होइनन्। सन्तहरूको अन्तर्दृष्टि बढ्दो रूपमा प्रष्ट हुनेछ; भनाइको अर्थ, जीवनका भावनाहरू झन्-झन् बढी प्रष्ट हुनेछन्, अनि निरन्तर गतिमा रहनेछन्। जसले अलिकति मात्रै हस्तक्षेप गर्नेछ, त्यसले एउटा विनाशकारी ठक्कर खानेछ अनि जीवनको दौड-मैदानमा धेरै पछाडि पर्नेछ। जो उदासीन छन्, जसले भक्तिको साथ खोजी गर्दैनन्, म तिनीहरूलाई पूरै त्यागिदिनेछु, अनि म तिनीहरूलाई विनाअपवाद बेवास्ता गर्नेछु। तिनीहरूलाई हजार वर्षहरूसम्म विपत्तिहरूमा रहन बाध्य बनाइनेछन्। जोशिलो भएर खोजी गर्नेहरूलाई चाहिँ—भनाइको अर्थ, जसले सधैँ हस्तक्षेपहरू गरिरहन्छन्—म तिनीहरूको अज्ञानतालाई फ्याँकिदिनेछु र मप्रति वफादार बनाउनेछु। त्यसको अतिरिक्त, तिनीहरूसित बुद्धि र समझ हुनेछ, अनि त्यसद्वारा तिनीहरूले झन् ठूलो विश्‍वाससहित खोजी गर्नेछ। म मेरा सबै ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई दोबर आशिष दिन्छु, अनि मेरो प्रेम सधैँ तिमीहरूमाथि आउँछ। म सधैँ तिमीहरूलाई देखरेख गरिरहन्छु र सुरक्षा गरिरहन्छु, अनि म तिमीहरूलाई शैतानको जालमा पर्न दिनेछैन। मैले मेरो काम सबै मानिसहरूको माझमा थाल्‍न गर्न सुरु गरेको छु; अर्थात्, मैले मेरो अर्को परियोजना थपेको छु। यिनीहरू हजार वर्षसम्म ख्रीष्टलाई सेवा प्रदान गर्ने मानिसहरू हुन्, अनि धेरै संख्यामा मानिसहरू मेरो राज्यभित्र भीड लाग्नेछन्।
मेरा छोराहरू, तिमीहरूले आफ्नो तालीमलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। तिमीहरूलाई धेरै कामले पर्खिरहेको छ, जुन तिमीहरूले गर्नुपर्छ र पूरा गर्नुपर्छ। म तिमीहरूले हतार गरेर परिपक्व भएको मात्र चाहना गर्छु, ताकि मैले तिमीहरूलाई सुम्पेको काम तिमीहरूले सिध्याउन सक। यो तिमीहरूको पवित्र उत्तरदायित्व हो, अनि यो तिमीहरू, अर्थात्, मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूले गर्नुपर्ने काम हो। तिमीहरू बाटोको अन्त्यसम्म नपुगेसम्म म तिमीहरूलाई रक्षा गर्नेछु, अनि म तिमीहरूलाई सुरक्षित राख्नेछु ताकि तिमीहरू मेरो साथ-साथ सदा परमानन्दमा रमाउन सक! तिमीहरूमध्ये हरेकसित यो तथ्यको अन्तर्ज्ञान हुनुपर्छ कि तिमीहरूलाई सिद्ध तुल्याउन मैले धेरै बलिदानहरू र धेरै वातावरणहरू व्यवस्थित गरेको छु। यी सबै मेरा आशिषहरू हुन् भनेर तिमीहरूलाई थाहा छ नि, छैन र? तिमीहरू सबै मेरा प्रिय छोराहरू हौ। जहिलेसम्म तिमीहरूले मलाई इमानदारीता पूर्वक प्रेम गर्छौ, म तिमीहरूमध्ये एउटैलाई पनि त्याग्नेछैन—यद्यपि यो तिमीहरूले मसित सामञ्जस्यतापूर्वक सहकार्य गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरामा भर पर्छ।
अघिल्लो: अध्याय ६५
अर्को: अध्याय ६७